ကလေးငယ်တွေရဲ့ အိပ်ယာခင်း၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံးတွေကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြမလဲ? - For her Myanmar
ကလေးငယ်တွေရဲ့ အိပ်ယာခင်း၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံးတွေကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြမလဲ?
အိပ်ရာထဲ ရှူရှူးပေါက်တဲ့ ဘေဘီလေးကြောင့် စိတ်ညစ်စရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်…
ကလေးငယ်အများစုက ညဘက်ဆိုအိပ်ယာထဲမှာ ရှူးပေါက်ချတတ်ကြပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မရောက်မချင်း ဒီလိုတွေဆက်ဖြစ်နေကြမှာပါ။ ဒီတော့ မေမေတို့အနေနဲ့ ဒီလို သေးစိုနေတဲ့ အိပ်ရာခင်းတွေကို ဘယ်လိုလျှော်ဖွပ်ရမလဲ။ ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရမလဲဆိုပြီး ခေါင်းစားနေတဲ့မေမေတို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ကလေးက အိပ်ရာထဲမှာ ညတိုင်းလိုလို ဆီးသွားနေပြီလား?
အိပ်ရာခင်းတွေဟာ သေးစိုနေတာ မဟုတ်သည့်တိုင်အောင် ချွေးတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေ၊ ပိုးမွှားတွေက ကပ်ငြိနေပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ သေးပေါက်ချခဲ့ရင်လည်း ကလေးကို အရမ်းမဆူပါနဲ့။ ဒါဟာ ကလေးငယ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသမထွက်ဘဲ သေးပေါက်ချတဲ့ အလေ့အထကို ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ နည်းလမ်းရှာပါ။
ကလေးငယ်ကို နေ့ခင်းပိုင်းမှာ အိမ်သာပုံမှန်သွားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။
ပေါက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ အောင့်မထားဘဲ ချက်ချင်းပေါက်တတ်အောင် အားပေးပါ။
နေ့လယ်စာစားချိန်၊ နေ့ခင်းအိပ်ရာထချိန်တွေမှာ သေးပေါက်တတ်အောင် အကျင့်လုပ်ပေးပါ။
ဒီလိုအကျင့်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးရင် အိပ်ရာထဲသေးပေါက်ချတဲ့အကျင့် လျော့ကျလာမှာပါ။
Related Article >>> လေကြေဆေးရည်ဟာ ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား?
မွေ့ရာ မပျက်စီးအောင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ?
သေးပေါက်ချတာကြောင့် မွေ့ရာတွေ မပျက်စီးစေချင်ရင် ရေစိုခံတဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေ သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အိပ်ရာခင်း နေ့တိုင်းလဲမယ်ဆိုရင် နှစ်ခုလောက်ဝယ်ထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒါမှ တစ်ခုခင်း၊ တစ်ခုလျှော်လို့ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ အနံ့အသက်မကောင်းတော့ဘဲ ကလေးကို သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း နည်းလမ်းကျဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အစွန်းအထင်းတွေကို ချက်ချင်းလျှော်ရင် ဖယ်ရ ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေကျံတာနဲ့ ချက်ချင်းလျှော်ပါ။
၁) အိပ်ယာခင်း၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံးစွပ်တွေကို ဖြုတ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်းလျှော်ပါ။ တစ်ခါလျှော်ပြီးလို့ အနံ့အသက်တွေ ကျန်နေသေးတယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လျှော်တဲ့အချိန်မှာ ရှာလကာရည် ထည့်လျှော်ပါ။ ရှာလကာရည်ဟာ အနံ့ဆိုးတွေကို စုပ်ယူပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အစွန်းအထင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ရေနွေးနဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်သုံးပြီး လျှော်ဖွပ်ပေးပါ။
၂) သန့်စင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို စုဆောင်းပါ။ ရေအေး၊ ရှာလကာရည်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်၊ စပရေးဘူး၊ ဖုန်စုပ်စက်တို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မွေ့ရာခင်းတွေ ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ဖို့ ပန်ကာ ဒါမှမဟုတ် Dryer လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
၃) အစွန်းအထင်းတွေ ပေကျံနေခဲ့ရင် တတ်နိုင်သလောက် ရေများများနဲ့သာ စိမ်ပါ။ ကုတ်ခြစ်တာမျိုး၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ပစ်တာမျိုးကို ရှောင်ပါ။
၄) ရေအေးနှစ်ဆ၊ ရှာလကာရည်တစ်ဆ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ်ရောပြီး အစွန်းအထင်းနေရာတွေကို စပရေးဘူးနဲ့ ဖြန်းပါ။ ဖြန်းတဲ့အခါမှာ အကွက် ပိုကြီးမသွားအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၁၀ – ၁၅ မိနစ်လောက် ထားလိုက်ပါ။ ရှာလကာရည်ဟာ အစွန်းအထင်းတွေကို ချေဖျက်ပြီး အနံ့ဆိုးများကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမှာပါ။
၅) ၁၀ -၁၅ မိနစ်ပြည့်ပြီးရင် အစွန်းကွက် နေရာကို ရေပြန်ဆွတ်ပါ။
၆) အဲဒီနေရာကို မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ သုတ်လိမ်းပါ။ လိမ်းပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါ ရေဆေးချလိုက်ရင် အစွန်းအထင်းတွေ အဝေးကို ရောက်သွားမှာပါ။
၇) ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ စုပ်ပေးပါ။ ဖုန်တွေ၊ အမွေးအမျှင်တွေ သန့်ရှင်းသွားအောင်ပါ။
၈) ခုနက ရေစိုနေတဲ့နေရာတွေကို ပန်ကာ ဒါမှမဟုတ် Dryer နဲ့ မှုတ်ပါ။
၉) တကယ်လို့ အစွန်းအထင်းမှိန်မှိန်လေး ကျန်သေးတယ်၊ အနံ့အသက်တွေ ကျန်နေသေးတယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း နောက်ထပ်တစ်ခါ ပြန်လုပ်ပါ။
၁၀) အစွန်းအထင်းတွေမရှိဘဲ ဒီအတိုင်းသန့်ရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဖုန်စုပ်စက်နဲ့နေ့တိုင်း သန့်ရှင်းပေးလို့ရပါတယ်။
အခုဆိုရင် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းလေးကို ရရှိသွားပြီဆိုတော့ ကလေးတွေရဲ့ အိပ်ယာခင်းလေးတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးက အချိန်လည်း သိပ်မပေးရဘဲ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့် မေမေတို့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
Translated by Paing (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
Reference : https://www.sleepcity.com
အိပျရာထဲ ရှူရှူးပေါကျတဲ့ ဘဘေီလေးကွောငျ့ စိတျညဈစရာ မလိုတော့ပါဘူးနျော…
ကလေးငယျအမြားစုက ညဘကျဆိုအိပျယာထဲမှာ ရှူးပေါကျခတြတျကွပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျ မရောကျမခငျြး ဒီလိုတှဆေကျဖွဈနကွေမှာပါ။ ဒီတော့ မမေတေို့အနနေဲ့ ဒီလို သေးစိုနတေဲ့ အိပျရာခငျးတှကေို ဘယျလိုလြှျောဖှပျရမလဲ။ ဘယျလို သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးရမလဲဆိုပွီး ခေါငျးစားနတေဲ့မမေတေို့အတှကျ ရညျရှယျပွီး ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးသားလိုကျပါတယျ။
ကလေးက အိပျရာထဲမှာ ညတိုငျးလိုလို ဆီးသှားနပွေီလား?
အိပျရာခငျးတှဟော သေးစိုနတော မဟုတျသညျ့တိုငျအောငျ ခြှေးတှေ၊ ခန်ဓာကိုယျက အဆီတှေ၊ ပိုးမှားတှကေ ကပျငွိနပေါတယျ။ အိပျရာထဲ သေးပေါကျခခြဲ့ရငျလညျး ကလေးကို အရမျးမဆူပါနဲ့။ ဒါဟာ ကလေးငယျနှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောသှားတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒေါသမထှကျဘဲ သေးပေါကျခတြဲ့ အလအေ့ထကို ပြောကျအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာ နညျးလမျးရှာပါ။
ကလေးငယျကို နခေ့ငျးပိုငျးမှာ အိမျသာပုံမှနျသှားတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ပေးပါ။
ပေါကျခငျြစိတျဖွဈလာတာနဲ့ အောငျ့မထားဘဲ ခကျြခငျြးပေါကျတတျအောငျ အားပေးပါ။
နလေ့ယျစာစားခြိနျ၊ နခေ့ငျးအိပျရာထခြိနျတှမှော သေးပေါကျတတျအောငျ အကငျြ့လုပျပေးပါ။
ဒီလိုအကငျြ့တှကေို လကေ့ငျြ့ပေးရငျ အိပျရာထဲသေးပေါကျခတြဲ့အကငျြ့ လြော့ကလြာမှာပါ။
Related Article >>> လကွေဆေေးရညျဟာ ကလေးတှရေဲ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျသလား?
မှရေ့ာ မပကျြစီးအောငျ ဘာတှေ လုပျရမလဲ?
သေးပေါကျခတြာကွောငျ့ မှရေ့ာတှေ မပကျြစီးစခေငျြရငျ ရစေိုခံတဲ့ အိပျယာခငျးတှေ သုံးပေးသငျ့ပါတယျ။ အိပျရာခငျး နတေို့ငျးလဲမယျဆိုရငျ နှဈခုလောကျဝယျထားမှ အဆငျပွမှောပါ။ ဒါမှ တဈခုခငျး၊ တဈခုလြှျောလို့ရမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကွာလာတဲ့အခါမှာတော့ အနံ့အသကျမကောငျးတော့ဘဲ ကလေးကို သကျတောငျ့သကျသာ မဖွဈစတေော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့အခါမှာလညျး နညျးလမျးကဖြို့ အရေးကွီးပါတယျ။
အစှနျးအထငျးတှကေို ခကျြခငျြးလြှျောရငျ ဖယျရ ပိုလှယျကူပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပကြေံတာနဲ့ ခကျြခငျြးလြှျောပါ။
၁) အိပျယာခငျး၊ စောငျ၊ ခေါငျးအုံးစှပျတှကေို ဖွုတျပွီး ပုံမှနျအတိုငျးလြှျောပါ။ တဈခါလြှျောပွီးလို့ အနံ့အသကျတှေ ကနျြနသေေးတယျဆိုရငျ နောကျတဈခေါကျ ထပျလြှျောတဲ့အခြိနျမှာ ရှာလကာရညျ ထညျ့လြှျောပါ။ ရှာလကာရညျဟာ အနံ့ဆိုးတှကေို စုပျယူပေးပါတယျ။ တကယျလို့ အစှနျးအထငျးတှေ ရှိနတေယျဆိုရငျ ရနှေေးနဲ့ ဆပျပွာမှုနျ့အနညျးငယျသုံးပွီး လြှျောဖှပျပေးပါ။
၂) သနျ့စငျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေို စုဆောငျးပါ။ ရအေေး၊ ရှာလကာရညျ၊ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ၊ ဆပျပွာမှုနျ့အနညျးငယျ၊ စပရေးဘူး၊ ဖုနျစုပျစကျတို့ လိုအပျပါတယျ။ မှရေ့ာခငျးတှေ ခွောကျသှအေ့ောငျလုပျဖို့ ပနျကာ ဒါမှမဟုတျ Dryer လညျး လိုအပျပါသေးတယျ။
၃) အစှနျးအထငျးတှေ ပကြေံနခေဲ့ရငျ တတျနိုငျသလောကျ ရမြေားမြားနဲ့သာ စိမျပါ။ ကုတျခွဈတာမြိုး၊ ခပျကွမျးကွမျး ပှတျပဈတာမြိုးကို ရှောငျပါ။
၄) ရအေေးနှဈဆ၊ ရှာလကာရညျတဈဆ၊ ဆပျပွာမှုနျ့အနညျးငယျရောပွီး အစှနျးအထငျးနရောတှကေို စပရေးဘူးနဲ့ ဖွနျးပါ။ ဖွနျးတဲ့အခါမှာ အကှကျ ပိုကွီးမသှားအောငျ ဂရုစိုကျပါ။ ပွီးရငျ ၁၀ – ၁၅ မိနဈလောကျ ထားလိုကျပါ။ ရှာလကာရညျဟာ အစှနျးအထငျးတှကေို ခဖြေကျြပွီး အနံ့ဆိုးမြားကို သကျသာ ပြောကျကငျးစမှောပါ။
၅) ၁၀ -၁၅ မိနဈပွညျ့ပွီးရငျ အစှနျးကှကျ နရောကို ရပွေနျဆှတျပါ။
၆) အဲဒီနရောကို မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ သုတျလိမျးပါ။ လိမျးပွီး ၁၅ မိနဈလောကျကွာတဲ့အခါ ရဆေေးခလြိုကျရငျ အစှနျးအထငျးတှေ အဝေးကို ရောကျသှားမှာပါ။
၇) ကနျြတဲ့အပိုငျးကိုတော့ ဖုနျစုပျစကျနဲ့ စုပျပေးပါ။ ဖုနျတှေ၊ အမှေးအမြှငျတှေ သနျ့ရှငျးသှားအောငျပါ။
၈) ခုနက ရစေိုနတေဲ့နရောတှကေို ပနျကာ ဒါမှမဟုတျ Dryer နဲ့ မှုတျပါ။
၉) တကယျလို့ အစှနျးအထငျးမှိနျမှိနျလေး ကနျြသေးတယျ၊ အနံ့အသကျတှေ ကနျြနသေေးတယျဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးအတိုငျး နောကျထပျတဈခါ ပွနျလုပျပါ။
၁၀) အစှနျးအထငျးတှမေရှိဘဲ ဒီအတိုငျးသနျ့ရှငျးခငျြတယျဆိုရငျ ဖုနျစုပျစကျနဲ့နတေို့ငျး သနျ့ရှငျးပေးလို့ရပါတယျ။
အခုဆိုရငျ လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ သနျ့ရှငျးရေးနညျးလမျးလေးကို ရရှိသှားပွီဆိုတော့ ကလေးတှရေဲ့ အိပျယာခငျးလေးတှကေို သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးထားနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးလေးက အခြိနျလညျး သိပျမပေးရဘဲ ထိရောကျတဲ့နညျးလမျးလေးဖွဈတာကွောငျ့ မမေတေို့သဘောကလြိမျ့မယျလို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ။
Tags: baby, clean, Health, Infant, mom, Toddler, Wash